Tayo sare Qiimaha surfactant SODIUM ETHYL 2-SULFOLAURATE/Sodium Lauroyl isethionate (SLI) cas 7381-01-3 Soo-saaraha iyo Bixiyaha | Zhuoer
Cuntada lagu daro
Dhexdhexaadiyeyaal dabiici ah
Maaddooyinka Kiimikada Kiimikada Maalinlaha ah
Xoolaha & Wakiilada Kaaliyaha Kiimikada
Surfactant SODIUM ETHYL 2-SULFOLAURATE/Sodium Lauroyl isethionate (SLI) cas 7381-01-3
SODIUM ETHYL 2-SULFOLAURATE/Sodium Lauroyl isethionate (SLI)
Daahirsanaanta: 78%~ 83%
Sodium Lauroyl Isethionate SLI waa surfactant khafiif ah oo si gaar ah loogu talagalay in lagu isticmaalo alaabada nadiifinta shaqsiyeed.
Waa badeecad xumbo sare leh oo bixisa cufan, labeen kareem ama qaabab.
Adeegga Tayada Wanaagsan & Bixinta Degdegga ah
Khadka tooska ah: +86-17321470240 (WhatsApp & Wechat)
SLI waxay ku dhowdahay cusbo la'aan waxayna u adkeysan kartaa biyaha adag iyo cusbada leh sifooyinka xumbo badan. Waxay la jaan qaadi kartaa saabuun waxayna siisaa kala firdhinta lime-saabuun aad u fiican si dib loogu dhigo sameynta qashin-qubka saabuunta baarka
Waxay leedahay xaddidnaan xadidan biyaha jilicsan iyo kuwa adag. Way ku xasilloon tahay samaysyada PH-da dhexdhexaadka u dhow iyo heerkulka qolka muddo dheer laakiin waxay si tartiib tartiib ah ugu shubi doontaa heerkulka sare.
Waxaa loo adeegsan karaa baararka syndet -ka iyo nidaamyada dareeraha sida shaambooyada, jirka oo maydha qubaysyada xumbo.
Xaashida Xogta Farsamada/TDS:
Muuqaal Dhagaxyada cadcad
Waxqabadka 78% ilaa 83%
Acid Dufan oo Bilaash ah 14% ugu badnaan
PH (10% biyaha ku jira qashin -qubka) 4.7 ilaa 6.0
Midabka (5% propanol/biyo) Ugu badnaan 20
Biyaha 1.5% ugu badnaan
CODSIGA ISETHIONATE SODIUM COCOYL
1.Waxa lagu isticmaalay saabuun:
Faa'iidooyinka isticmaalka saabuunta: Mid waa inuu leeyahay awood ka fiican oo uu iskaga caabin karo jilicsanaanta. Midda kale waa, waxay yareyn kartaa qiimaha PH ee saabuunta, khafiifnimada iyo xanaaqa hoose, waa alaabta ceeriin ee ugu fiican soo saarista saabuun dhexdhexaad ah.
Waa khafiifnimo waxayna abuuri kartaa xumbo hodan ah oo jilicsan, si fiican uga saari kara wasakhda.
3.Used jel qubeyska:
Marka laga reebo soo -saaridda xumbo hodan ah oo jilicsan, waxay leedahay waxqabad weyn oo ah yareynta siibashada, gebi ahaanba waxay baabi'isaa dareenka dufanka leh ee soo ifbaxaya ka dib isticmaalka jel -dhaqidda dhaqameed.Waxayna maqaarkaaga ka dhigi kartaa mid jilicsan oo jilicsan
4. Waxaa lagu isticmaalay shaambo:
SCI -ga xanaaq yar oo hooseeya ayaa beddelaya surfactants ka tagay oo leh walxo sun ah Waxay ilaalin kartaa oo daweyn kartaa timaha badbaado badan.
Sideen u qaataa SODIUM ETHYL 2-SULFOLAURATE/Sodium Lauroyl isethionate (SLI) cas 7381-01-3?
Shuruudaha lacag -bixinta
T/T (wareejinta telex), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), iwm.
≤25kg: saddex maalmood oo shaqo gudahood kadib markii lacag -bixinta la helay.
＞25kg: hal toddobaad
La heli karo
10g/100g/200g/500g/1kg/25kg ama sidaad u baahan tahay.
Ku kaydi weelka si adag u xiran meel qalalan, qabow oo hawo fiican leh.
Waxa aan bixin karno
Hore: Kaydka noolaha N-Tris (hydroxymethyl) methyl-3-aminopropanesulfonicacid/TAAS CAS 29915-38-6
Xiga: Sahayda warshadda 2-Nitrobenzaldehyde/O-Nitrobenzaldehyde CAS 552-89-6 oo leh qiimaha ugu fiican
Sodium Ethyl 2-Sulfolaurate
Talo soo jeedinta
Nadiifnimo sare BIS-TRIS Buffer CAS 6976-37-0 oo leh ...
Daahirsanaanta sare Tris Hydrochloride/TRIS-HCL CAS 118 ...
Sahayda warshadda Uridine 5-diphosphate disodium s ...
Qiimaha warshadda 99% Cytidine 5′-triphosphat ...
Qiimaha warshadda 99% Guanosine -5 -triphosphoric ai ...
Sahayda sahayda amino acid daryeelka shakhsiyeed ...
Maya 1588, Lianhang Road, Minhang Dist, Shanghai, Shiinaha